CBD ရေနံအကျိုးကျေးဇူးများ – CBD Olie Nieuws – CBD Olie Info – ဗွီဒီယိုများ – Nieuws
CBD ရေနံလျှင်မြန်စွာအဖြစ်လူကြိုက်များနေသည် 100% အများအပြားဝေဒနာတွေများအတွက်အထောက်အပံ့အော်ဂဲနစ်နှင့်သဘာဖြည့်စွက်, ထိုကဲ့သို့သောဝက်ရူးပြန်ရောဂါက MS အဖြစ်ရောဂါများနှင့်ရောဂါ, ပါကင်, အယ်လ်ဇိုင်းမား, ဒူလာ, စိတ်ဖိစီးမှု, အိပ်ပျက်ခြင်း.
အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ် CBD ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလုပ်နေလဲ?
CBD နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အခမဲ့ CBD လမ်းညွှန်.
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး CBD ရေနံအဘယ်မှာဝယ်နိုင်?
စတိုးဆိုင်များများစာရင်းကိုများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ အရာယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြပြီးမှသာအရည်အသွေးအ CBD ရေနံရောင်း.
CBD cannabidiol အတိုကောက်, ဒါဟာထက်ပိုတစျခုဖွစျသညျ 400 စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့အမျှင်လျှော်နေခွဲထုတ်သောအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှု ascribed သောဆေးခြောက်စက်ရုံအတွက်ရှာတွေ့တ္ထုများ.
CBD ဆေးခြောက်၏ psychoactive ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CBD လုံခြုံ, ဒါကြောင့်သင်အမြင့်ဆုံးမဟုတျပါဘူးကြောင့်စွဲလမ်းမဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါ CBD ထက်အလုပ်လုပ်တယ်?
CBD ရေနံယူပြီးပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် cannabinoid receptors ကိုသက်ဝင်နှင့်ဆဲလ်မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲ.
လေ့လာရေးငါတို့သည်ငါတို့၏စနစ်အန္တရာယ်ကင်း cannabinoids မိတ်ဆက်ပေးလျှင်ပြသကြ, အဘယ်သူမျှမမှီခိုလည်းမရှိ, သို့သော်ကျန်းမာ endocannabinoid.
THC မပါဘဲ CBD ရေနံ (<0.2%)
သငျသညျစတိုးဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်းအတွက်မဝယ်နိုင်သည့်အဆိုပါ CBD ရေနံ THC တစ်ဦးကအလွန်နိမ့်ရာခိုင်နှုန်းပါရှိသည်.
CBD Olie တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး THC
CBD ရေနံ THC လည်းအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် (အထူးသဖြင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါများအတွက်, နာတာရှည်နာကျင်မှုများနှင့်အဆစ်လူနာတွေကို), echter THC is ook het bestanddeel waar je “high” van wordt.
ထိုသို့ 100% သဘာဝအများနှင့် endogenous
CBD ရေနံလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. het kan zijn dat CBD niet bij jou “aanslaat”.
ကောင်းသောဆီတပုလင်းဝယ်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး 2,75% CBD, အဆိုပါဖလားကိုသည်အနည်းဆုံးအားသည်အထိကိုသုံးပါ.
CBD ရေနံအဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီတစ်ဦးဆေးဝါးအဖြစ်မှတ်မဖြစ်သင့်, တစ်ခုသာအစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်.
ဒါဟာဥပဒေပြုပြင်ဆင်သည်အထိ CBD အကြောင်းကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများစေရန်တားမြစ်ထားသည်, မျှော်လင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ CBD သရုပ်ဖော်အပြုသဘောဂုဏ်သတ္တိများဘာလို့လဲဆိုတော့မကြာမီဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်.
CBD ဆီ Applications ကို
ဤတွင် CBD ဆီထိရောက်မှုတစ်လက်တွေ့ကျတဲ့သရုပ်ပြဖြစ်ပါသည်.
အနာပေါ်ကျဲပါးတချို့ CBD ရေနံဝတ်သို့မဟုတ် CBD ကြည်ညိုအသုံးပြုနိုင်သည်.
CBD ရေနံကြိုးစားပါ ထိုကဲ့သို့သောနောက်ကျောနာကျင်မှုအဖြစ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနာကျင်မှုများအတွက်
CBD ရေနံ သာ. ချမ်းသာပေးသည်, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ဥပမာ
ပိုကောင်းတဲ့အိပ်ကူညီပေးသည်, အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်း (သင်၏ဦးခေါင်းငြိမ်ဝပ်စွာနေ)
စျေးကွက်အပေါ်သီးခြား CBD ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်, CBD ထွက်ရှိသောကိုခေါ်က melatonin နှင့်အတူပူးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျသော Meladol.
အခမဲ့ CBD လမ်းညွှန် Download ဒီဖြည့်စွက်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက.
Autism ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့နည်းစေ, ADHD ADD
လျှော့ချနံပါတ်နှင့်ပြင်းထန်မှု Epileptic သိမ်းယူမှု
psychoses လျှော့ချ (antipsychoticum)
ကဲ့သို့သော neuro-ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါများပိုကောင်းစေပါတယ်(အယ်လ်ဇိုင်းမား, ဒေါ်, ပါကင်စသည်တို့ကို)
ဝန်ချောင်းဆိုးတိုးတက်ကောင်းမွန် (antispasmodic အကျိုးသက်ရောက်မှု)
ဒတ်ခ်ျပေးသွင်း Medi လျှော်၏ CBD ကုန်ပစ္စည်းများ Range.
မဝယ် 10 ml ကို CBD ရေနံတစ်ပုလင်း, တစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူ 2.75% သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား.
3 နေ့စဉ်ကြိမ် (နံနက်, ညနေစာ, ညနေ) 3တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းအပေါ် x ကိုတစ်စက်, အဆိုပါ CBD ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါဒါလျှာအောက်မှာတစ်မိနစ်ထက်.
အချို့အချိန် Give, အနည်းဆုံးဒီသလား 4-7 ရက်ပေါင်း. သင်သည်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသတိထားမိပါနဲ့, ဆေးထိုးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် CBD ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု.
အများဆုံး 5x နေ့စဉ်သိမ်းဆည်းထားပါ, 10 တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်.
သင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်လျှင်, သင်တစ်ဦး option ကိုများအတွက် THC နှင့်အတူထို့နောက်ဖြစ်ကောင်း CBD ရေနံ.
THC မှရေနံ CBD အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်မရရှိနိုင်သို့မဟုတ်, သငျတို့သအသုံးပြုမှုရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်.
CBD ရေနံအခြေခံအားဖြင့်အန္တရာယ်မဖြစ်, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကသင်၏ဆေးဝါးလမ်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဥပမာအားဖြင့်, Anti-စိတ်ကျရောဂါ, inflammatory, beta ကို blockers နှင့်တူသော.
အခမဲ့ CBD လမ်းညွှန် သင်က CBD ရေနံများ၏ပေါင်းစပ်နှင့်ဆေးဝါးအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတှေ့နိုငျ.
အဆိုပါ CBD များတွင်သင်သည်ဗီဒီယိုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများနှင့်လင့်များအပေါ်တစ်ဦးအခနျးတှငျတှေ့ရပါလိမျ့မပဲ့ပြင်.
စတူဒီယိုဧည့်သည်များနှင့်အတူ Jinek CBD ရေနံနှင့် Maaike ၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပြောဆိုရှိရာအောက်ပါဗီဒီယိုလည်းကြည့်ရှုပါ, ရာသူမ CBD ရေနံကတည်းကအခြားကလေးသည်သူမ၏မိဘများအနေဖြင့်ရရှိသွားတဲ့.
အကောင်းဆုံးကိုအမှတ်တံဆိပ် CBD ရေနံဘာတွေလဲ?
Een “best” merk is er niet, သင်မူကားလုံခြုံစိတ်ချစွာ CBD ရေနံယာကုပ်အမျိုးကို Hooy နိုင်, ဒါကြောင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Medi လျှော်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Medi ကိုသုံးပါ, သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးနေကြတယ်.
CBD BV ဖြစ်ပါသည်. CBD Capsule လည်းရရှိနိုင်, CBD ကြည်ညို, CBD မှုန်ရေမွှားရေ, CBD Vape (အငွေ့ပျံဖို့), CBD Suppositories, CBD ခေါက်ဆွဲ.
THC တစ်ဦးအနိမ့်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် CBD ရေနံမူးယစ်ဆေးစတိုးဆိုင်များနှင့်ကျန်းမာရေးအစားအစာစတိုးဆိုင်များမှာလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်, ဒါပေမယ့်သင်တန်းလည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိသင့်လက်တင်ကုလားထိုင်ကနေအမိန့်ချမှတ်ခံရ.
အကြံပေးချက်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထောက်ပံ့ရေးသတင်းရင်းမြစ်များ၏စာရင်းများအတွက် CBD လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ.
သင်ဆဲ CBD ရေနံများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မသေချာဆိုရင်, သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကျေးဇူးပြုပြီး.
CBD ရေနံအဘယ်သူမျှမအံ့ဖွယ်ဖြည့်စွက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်အမျိုးမျိုးသောအနာရောဂါစွဲရောဂါနှင့်အတူသဘာဝလမ်း၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ.
အခမဲ့ CBD လမ်းညွှန် Download